Ahoana ny fomba hiarovana ny findainao amin'ny malware LokiBot | Androidsis
Ahoana ny fomba hiarovana ny findainao amin'ny malware LokiBot
DaniPlay | | fiarovana, Tutorials
Nandritra ny volana vitsivitsy izao, ny mpampiasa malware LokiBot dia manenjika ireo mpampiasa Android ary koa ireo an'ny Windows, hany ka ny zavatra tsara indrindra amin'ity tranga ity dia ny miaro tena. Betsaka ny rafitra tsy mandeha amin'ny laoniny, izay manimba ny telefaon'ireo mpampiasa ankehitriny.
LokiBot, fantatra ihany koa amin'ny hoe Loki-Bot na Loki PWS, dia malware Trojan izay miditra amin'ny rafitra mangalatra fampahalalana miafina. Izy io dia atao mba hahazoana anarana sy tenimiafina, kitapom-bola crypto ary bebe kokoa, toy ny PayPal na ny angon-drakitra fidirana amin'ny bankinao.
Ny fandrahonana LokiBot dia nivoatra hatramin'ny nipoirany tamin'ny tapaky ny taona 2010, iray amin'ireo fiovana farany manafina ireo rakitra mampidi-doza sy kaody loharano ao anaty rakitra sary, manalavitra ny fahitana. Ny taranaka sasany dia Parasite, Xerxes, Mysterybot ary ny iray farany dia BlackRock, fantatra hatramin'ny Mey 2020.
1 Noho izany dia mety voan'ny LokiBot ianao
2 Ahoana ny fanesorana ny LokiBot amin'ny Android
Noho izany dia mety voan'ny LokiBot ianao
Mora ny mitsofoka an'i LokiBot, indrindra raha resaka spam dia tonga amina rakitra mifamatotra izay voan'ny virus ary tonga amin'ny faktiora hosoka, baiko iray avy amin'ny tranonkala iray heverina, sns. Iray amin'ireo fanentanana farany nataon'ny LokiBot nanararaotra ny areti-mandringana nahafahana niely nanerana an'izao tontolo izao.
Tonga ihany koa izy tamin'ny fametrahana amina lalao sandoka avy amin'ny Epic Games, mpamorona lohateny malaza toy ny Fortnite, iray amin'ireo lohateny malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Raha vantany vao nosintonina ny APK ary mandeha ny fitaovana Android dia nahavita nanjary voan'ny virus hanararaotana sy hangalatra vaovao izy.
Ahoana ny fanesorana ny LokiBot amin'ny Android
Ny zavatra voalohany sy ilaina dia ny fanesorana ireo fisalasalana mampiahiahy, ireo izay tsy ampiasainao ary tsy atokisanao fa manimba izany, ampiasao ny tetika fananana farafaharatsiny ary avy hatrany amin'ireo loharano azo antoka. Aza adino ny mampidina rindranasa avy amin'ny Play Store ary manamarina hatrany fa avy amin'ny orinasa ofisialy izy ireo.
Dingana iray lehibe manandanja ihany koa ny fandefasana fitaovana detection, anisan'ny tsara indrindra ho an'ny fanesorana malware dia BitDefender Antivirus Free (maimaim-poana) ary MalwareBytes Security. Ny zava-dehibe dia ny fametrahana ny roa sy ny fandinihana ny telefaona raha misy ny fandrahonana mety hanimba ny data-nao.
Fiarovana Malwarebytes: Antivirus & Anti-Malware
Mba hanafoanana ireo fampiharana izay ahiahianao dia azonao atao izany amin'ny Settings> ApplicationsRaha hitanao fa misy fitaovana napetraka tsy nahazoanao alàlana dia esory tsy misy fampandrenesana mialoha. Alohan'ny handehananao amin'ireo fitaovana roa ireo dia tsara kokoa ny mandalo ny antivirus sy ny anti-malware, izay afaka minitra vitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hiarovana ny findainao amin'ny malware LokiBot
iQOO U3 dia doka amin'ny Dimensity 800U ary vidiny ambany 200 €
Ahoana ny fomba hampiasana maody maizina ao amin'ny Google Earth